Semalt Unyanzvi: Google Maps SeNew Form For Social Media Marketing
Haisi nguva yakareba yapfuura, Google Plus ndiyo yaiva mutungamiri wezvinhu zvose maereranomabhizimusi emunzvimbo. Zvisinei, Google My Bhizinesi yatotora webhusaiti yevanamabhizimisi. Nhasi vashandisi vanogona kushandisa Google Maps kuti vaite zvakafananabasa. Vamwe SEO analytics vanoona Google Maps sevanosangana nevamwe vevanhu kuti vazvivanze. Makambani akawanda akatora nzira iyi yekuita sanganoNzira dzekutengeserana nehupfumi dzinobereka zvibereko paGoogle Maps - arredamento ludoteche bari.
Google Maps haisi yehupenyu hwehuwandu hwemashoko ewebhu asi ine zvimwe zvakafanana nezvinojairikasocial media platforms. Nzvimbo dzeMasikirwo ezveMabhizimisi ezveMabhizimisi (SMM) maitiro anoshanda kuGoogle Maps sezvakangoita mumagariro evanhu. Google Maps inemukana wekuwedzera kukwanisa kwako kuwanda.
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt ,Nik Chaykovskiy anotsanangura zvinhu zviripo muGoogle maps, izvo zvinogona kuva nemigumisiro yevashandi.
Nhamba yebhizimisi pamamapu
Bhizimisi roga roga rine kadhi, rine mashoko akadai sedunhu renharaunda, nyeredzi,kuongororwa kwevatengi, uye mapeji ezvo zvakasimba. Muchikamu chepamusoro, kune chidimbu chemashoko akadai sechifukidzo chinyorwa, kutengesa mutengo mukatimadhora, nyanzvi dzevashandi, nhamba yebhizimisi uye chibatanidzo chekuona nzvimbo yekugara. Google mapepa anopa nzvimbo yakafanana kune imwenekuda kwehuwandu hwemashoko evanhu kuisa:
Chengetedza. Mumwe anogona kuchengetedza kutsvaga kana kuti site kuti atarise mairi gare gare.
nharaunda iri pedyo. Iyi ihudziro pamusoro pemabhizimisi akafanana mune iyo chikamu mukatikusvika kune imwe nzvimbo yauri kushandisa. Google inotaura kuti inenge 80% yezvi tsvakurudzo dzinotsvaga dzinobva kumashure efoni..Izvi zvinogumakunowedzera kukosha kwekuita kuti nzvimbo yako yepasiti ishamise.
Tumira kuMunhare yangu. Vashandi vemafoni vane Google account vanogona kushandisa chinhu ichi kuti vagovanalink kana nzvimbo yebhizimisi.
Shandisa. Pane permalink kubatsira vashandisi kutumira mashoko evashandisi akasiyananzvimbo. Unogona kupfupisa chibvumirano uchishandisa purogiramu yemagwaro Google inopa.
Nzvimbo yehupenyu hweGoogle Maps
Vashandi vanoona kuona mufananidzo. Machenda anokwanisa kugovana mifananidzo muchikamu chino.Pane nzvimbo yakanyatsorongedzerwa kuti ishandiswe. Mushandisi anogona kuverenga bhizinesi kana kutosiya mhinduro. Vashandi vanogona kugadzira mapepa emitemoapo vanogona kusanganisira zvavanoda "mavara" semabhizimisi.
Mabhizimisi emunharaunda anofanira kukurudzira vashandisi kuongorora mabhizinesi. Vanhu vanogonawo kuisamufananidzo wavo kuita kuti vanhu vaone zvichitarisira. Kunyanya bhizinesi rine maongorudzo, kunyanya kambani inowedzera zvezerakutarisana nevamwe. Mabhizimusi anokwanisa kuteerera zvinotengeswa nevatengi uye kuita zvigadziriswa zvinodiwa.
Google Maps inotsiva Google Plus Local. Pakutanga, Google yakasimbisa kusikanzvimbo inoshandiswa yekunamatira mabhizinesi. Munguva iyi, maGoogle mapepa angangodaro ane nzvimbo yakafanana neyozvino kuchinja kweGoogle magadziri.Google Maps inogona kunge isiri nzvimbo yekutambirwa kwevanhu asi ine zvimwe zvinhu zvine chokuita nekutengeserana kwemashoko evanhu. Somuenzaniso, vashandisi vanowana mukanakukurudzira mabhizinesi avo uye mabasa kuburikidza nekubatanidzwa kwenzvimbo. Mumwe anogona kuwedzera SEO achishandisa meta tags uye nzvimbo uye yakabhadharwatargeted ads. Google inonyanya kusimbisa maererano neSEO yepamunharaunda pamwe nekuita mabhizimisi kushandiswa kushandisa nzvimbo yavo yenzvimbo. Googlemapepa angave ane simba guru mukutsvaga semafambisirwo evanhu.